Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Jimce Ah 28 May
HomeWarka Xiisaha LehWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Jimce Ah 28 May
May 28, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Manchester United ayaa qarka u saaran inay isku daygii ugu dambeeyay u samayso saxeexa khadka dhexe ee Wolves ee Ruben Neves. (Sun)
Man United ayaa u muuqata mid qiimaha dartii uga tagi karta weeraryahan Darwin Nunez oo ay Benfica u sheegtay inay 100 Milyan oo pound ku doonayso iibkiisa. (Star)
United ayaa sidoo kale tababare Ten Hag kala tashatay suurogalnimada saxeexa Pau Torres oo Villarreal ka tirsan. (Manchester Evening News)
Chelsea ayaa la filayaa inay daafacyo bartilmaameedsato suuqa xagaagan xilli la sheegayo inay 200 Milyan oo pound la galayso suuqa, Man City ayay kula tartami karaan daafaca bidix ee Brighton ee Marc Cucurella halka Nkuku oo RB Leipzig ka tirsan uu bartilmaameed kale u yahay. (Sun)
Liverpool ayaa dalab 25 Milyan oo pound ah ka heli doonta Bayern Munich oo ka doonaysa saxeexa Sadio Mane si ay bedel ugaga dhigto Robert Lewandowski. (L’Equipe – in French)
Aston Villa ayaa baadhaysa suurogalnimada ay Luis Suarez kula soo saxeexan karto kaddib markii 35 sano jirkaas ay fasaxday Atletico Madrid, Suarez ayaa hore Liverpool ugaga soo garab ciyaaray tababare Steven Gerrard. (Telegraph – subscription required)
Paris St-Germain ayaa suuqa dhigtay Neymar oo lacag rekoodh ahayd oo 222 Milyan oo euro ahayd ugaga soo biiray Barcelona shan sano kahor. (ESPN)
PSG ayaa sidoo kale loosoo bandhigay saxeexa Nicolas Pepe oo Arsenal ka tirsan. (Foot Mercato – in French)
Newcastle ayaa xagaaga doonaysa saxeexa garabka Bayer Leverkusen ee Moussa Diaby. (Telegraph – subscription required)
Gabriel Jesus wakiilkiisa Marcelo Pettinati ayaa sheegay in wadahadalada mustaqbalka xiddigiisu ay horumar samayn doonaan kaddib kulamada caalamiga ah xilli lala xidhiidhinayo 25 sano jirkaas Arsenal iyo Tottenham. (Mirror)
Baadigoobka ay Arsenal ugu jirto saxeexa weeraryahan dhexe ayaa u dhaxeeya midkood Jesus iyo Alvaro Morata oo laba sano oo amaah ah Juventus ugaga laabanaya Atletico Madrid. (Mirror)
Atletico Madrid ayaa diiday fursada ay xagaagan bilaash ugula saxeexan karaysay Gareth Bale iyo Angel Di Maria oo heshiisyadooda Real Madrid iyo PSG dhacayaan. (ESPN)
Sevilla ayaan aqbali doonin wax 65 Milyan oo euro ka yar inay ku iibiso daafaceeda Kounde oo la filayo in Chelsea dalabkii koowaad ka gudbiso. (Fabrizio Romano)
Chelsea ayaa ku rajo weyn in dalab 50 Milyan oo euro ah oo lagu daray lacago shuruudo ku xidhan ay ku heli doonaan Kounde. (Telegraph – subscription required)
Roma ayaa rajaynaysa inay heshiis cusub u bandhigto Tammy Abraham oo ay suurogalnimada lagu heli karo weydiinayaan kooxaha Arsenal, Newcastle iyo Aston Villa. (90min)
Inter ayaa lacag ka badan 20 Milyan oo pound ku doonaysa iibka Federico Dimarco oo ay doonayso Arsenal. (Sun)
Arsenal ayaa loolan kagala kulmaysa Tottenham saxeexa daafaca midig ee Djed Spence oo ka tirsan Middlesbrough balse amaah ugu maqan Nottingham Forest. (Sun)
Newcastle ayaa Everton iyo West Ham ku garaaci karta saxeexa daafaca Burnley ee James Tarkowski oo heshiiskiisu xagaaga dhacayo. (Football Insider)
Crystal Palace ayaa wadahadalo meel fiican maraya kula jirta goolhayaha West Bromwich laga fasaxay ee Sam Johnstone oo Man United iyo Tottenham lala xidhiidhinayay. (Mail)
West Ham ayaan iibin doonin khadkeeda dhexe ee Tomas Soucek walow ay soo baxeen warar sheegaya inay dalabaadkiisa dhagaysan doonaan. (Sky Sports)
Chelsea ayay tahay inay go’aan ka gaadho daafaceeda dhexe ee 19 sano jirka ah ee Levi Colwill oo amaah ugu maqan Huddersfield oo ay arrimihiis wax ka weydiiyeen Arsenal, Leicester iyo kooxo kale oo Premier League ahi. (Goal)